LOHA HEVITRA ... Miseho izao ny tsiambaratelo! | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 23, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsia, tsy notafihan'ny spammer ny tranokalako. Mbola i Doug no manoratra ity lahatsoratra ity ary ataoko amin'ny fahafahako misafidy izany.
Efa nahatratra pejy web iray nanao dokambarotra ve ianao fa hamoaka ny tsiambaratelo rehetra momba ny olana tadiavinao hovahana? Ny pejy dia manomboka amin'ny lahatsoratra an-tsoratra tsy mahazatra voasoratra, mampiditra anao, sary sahisahy, fijoroana vavolombelona maharesy… misintona anao mandra-panongonao amin'ny fomba majika ny carte de crédit anao eo am-paosinao.
Rehefa niasa tamin'ny orinasam-pifandraisana mivantana aho dia nijery asa tanana Pat Coyle kopia lava taratasy nahatratra ny tahan'ny valiny azo antoka. Mino namana sy mpanoratra Erik Deckers dia mpankafy sy mpanoratra kopia lava koa. Na inona na inona vokatra tena izy, tsy mampino ny talentan'ireto mpanoratra ireto… saika faran'ny hypnotis ianao amin'ny faran'ny taratasy.
Ho an'ny mpivarotra sasany, ity karazan-tsoratra ity dia maharikoriko ary, indraindray, mino izy ireo fa mamitaka. Tsy afaka milaza aho hoe manaiky aho. Afaka mamantatra azy mora foana aho rehefa mahita azy, saingy sarotra indraindray ny miala. Nisintona (sy nandoa vola) ho an'ny ebook roa aho tamin'ny fotoanako - ary mino aho fa nahazo ny sandan'ny volako.
Maro amin'ireo olona ireo no mpivarotra fampahalalana, wheeling ary fifampiraharahana amin'ny ebooks, webinar ary fihaonambe. Misokatra amin'ny tsiro maimaimpoana ianao izay mampiditra anao ary afaka mandany vola an'aliny dolara ianao amin'ny fotoana nialanao tamin'ny kaonferansa nataony.
Na izany aza, kely dia kely ny vidiny… raha manana ny talenta fampiroboroboan'ireto olona ireto ianao ary vonona ny hametraka an'izay rehetra anananao… dia afaka mahazo vola be ianao. Rehefa mijery ny mpamaky ny bilaogiko sy ny tranokalako aho, dia afaka nandany vola be tamin'ny tsy fanarahana ny dian'i Joel sy nahatonga ahy ho lasa mpivarotra fampahalalana.
Ny ankamaroan'ny olona dia mampifandray ny maha Millionaire amin'ny Internet amin'ny filan'ny dot-com tamin'ny faran'ny taona 1990… Saingy nisy andiana mpisava lalana Internet Marketing mpisolo toerana mangingina nanankarena tamin'ny Internet talohan'ny nanaovan'ny Yahoo na Google ny teny hoe "fitadiavam-bola an-tserasera". Maro amin'izy ireo no nanangana ny fanjakany manodidina ny teny tsotra fa mahery indrindra… Tsindrio ETO raha hanafatra.
Joel Comm's Mpivarotra tsara indrindra any New York Times, Tsindrio ETO raha hanafatra, dia tsy script marketing na boky momba ny fomba hahatongavana milionera. Fa kosa, fomba fijery manaitra ny tantara tany am-boalohany indrindra amin'ny Internet sy ireo olona izay nahazo tombony voalohany tany - ny sasany amin'izy ireo dia mbola tsy henonao mihitsy. Araka ny Mark Joyner dia milaza hoe: "Ity misy vondron'olona vitsivitsy izay, tamin'ny fiandohan'ny revolisiona teknolojia, dia nahita ny tombony ary naka izany."
Misy ny mpivarotra Internet sy ny mpivarotra Internet. Fantatro fa mitovy ny feon'izy ireo, saingy matetika ny vondrona iray dia mijery ny iray hafa toy ny ankizy tsy miankina amin'ny sekoly mifampitsikera olona avy amin'ny sekolim-panjakana. Amin'ity tranga ity, na izany aza, mazàna dia ny sekolim-panjakana no mandresy… mamindra tombony be amin'ny fomba tsy mahazatra. Toa sahala amin'ny hoe tsy eo ambony sy ambony izy io… fa an-tsitrapo kosa ny fifamofoana ary indostria lehibe tokoa io.
Tsy manambany an'ireo mpivarotra Internet mihitsy aho. Andao hojerentsika ny tantara ary, ohatra, ampitahao Corey Rudl (RIP) mankany Pets.com, mazava ny hoe iza no nanana ny fahefana mijanona sy ny talenta. Mazava ihany koa hoe iza no nandany ny volany ary nandany ny vola azony. Tena talanjona aho amin'ny talenta ataon'ireto mpandraharaha ireto amin'ny asa aman-draharahany mihombo, mifampitady fifamoivoizana (fa tsy mifaninana), mifampitaiza sy mifampianatra momba izay mandeha ary mampiasa tsy misy kilema ireo fitaovana rehetra ananany hizaha toetra sy hamokarana kopia izay niova fo.
Tsy purist Marketing aho izay maneso ireo mpandraharaha ireo, heveriko fa mahavariana ny faharetany sy ny tantaran'izy ireo. Ny bokin'i Joel dia tantara mitantara ny sasany amin'ireo tena mahomby indrindra amin'ny mpivarotra Internet. Ny tantaran'ny tovolahy miari-tory mandritra ny alina amin'ny fifehezany ny asa-tanany, matory any am-piasana, voaroaka ary avy eo lasa milionera dia aingam-panahy lehibe ho an'ny mpandraharaha. Ny famakiana ireo tantara dia mihosin-dra! Ny salanisa CMO na talen'ny Marketing dia afaka mianatra zavatra betsaka amin'ity vondrona ity.
Ny talata alina aho dia nahavita Super Crunchers tao anaty fiaramanidina nankany San Francisco ary nahavita aho Tsindrio ETO raha hanafatra io maraina io tamin'ny sidina niverina - ny pejy 279 rehetra. Mamaky be dia be ity - aza hadino ny maka azy rehefa mahazo fotoana ianao.
Mahatsiaro ebook aza aho ato ho ato!
Tags: famerenana bokyclick here to orderjoel comm
Apr 24, 2009 amin'ny 10: 33 AM
Lahatsoratra mahafinaritra, Doug! Azoko lazaina fa tena "nampihetsi-po anao" ireo boky ireo. Ary ny zava-misy dia fantatro tsara ny karazana kopia resahinao. Nianatra semi-sekoly tao aho fony aho nihalehibe tao amin'ny masoivohon'ny dokam-barotra mivantana izay nananako santionany antontam-bola hivezivezy, mba hahitana ny fitaomam-panahiko amin'ny fonosana mailaka mivantana manaraka, miaraka amin'ny boky mainty lehibe nataon'ny lehilahy antitra sasany. izay noheverina ho mpampianatra momba ny varotra mivantana. (Mbola kely aho tamin'izany, vao nianatra momba ny angano DM izay namorona zavatra toa an'i Johnson Boxes sy snap-paks.) Na izany na tsy izany, dia nisy fanamby nanoratra taratasy 6-pejy mivarotra famandrihana amin'ny Consumer Reports (izany no "taratasy lava" hevitra). Soraty izany fa nataoko, fa tsy nandefa izany ny mpanjifa. Mbola nianatra ny asako aho tamin'izany, ary azo antoka fa sarotra izany.
Tsaroako fony aho vao nanomboka namaky taratasy famaliana mivantana, nefa tsy mbola nahazo betsaka tamin'ny tenako nandritra ny taom-pianarana tany amin'ny lisea sy tao amin'ny oniversite aho (mpanoratra taratasy nafana fo ho an'ireo namana penina any ampitan-dranomasina, namana ary havana), noheveriko fa toa evanjelika ireo taratasy ireo.
Eny, mahafinaritra ny ebook! Ataovy!
Apr 24, 2009 ao amin'ny 8: PM PM
Manomboka ny ebook!